ọnụego, Spain maka Nile n'Afọ Holiday | Tourism-Spot.com
Homeọnụego, Spain maka Nile n'Afọ Holiday	Tourism-Spot.com
ọnụego, Spain maka Nile n'Afọ Holiday
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga Spain, -eme ka oge na-eji ụbọchị ole na ole na Tarifa, Spain. Nke a bụ ihe kasị ndịda obodo ke Spain jupụtara eke nkiri nke ga-itu n'anya gị. Ọ & rsquo; s a obere obodo nke dị nso Strait nke Gibraltar eme n'obodo nwere ogologo beach akara maka ndị zuru okè okpomọkụ ezumike. ọnụego bụ nanị ndị kasị nọrọ jụụ ma mara mma ebe ezumike ke Spain. Ọ na-enye dịgasị iche iche nke ndị njem nleta na-eme. Ka & rsquo; s lelee ebe kasị mma na ihe na-eme na ọnụego.
Ga-Hà Ihe na Tarifa Spain
1. whale Ikiri
Ikiri whales na Azụ dolphin n'ime ohia bụ mgbe a mesmerizing ahụmahụ. Na na Tarifa ị pụrụ ịhụ nke a mma ofụri isua. ọ pụtara, ọ dịghị & rsquo; t mkpa mgbe ị na-Tarifa, ị & rsquo; Eh na-enweta ohere ịhụ dị iche iche ụdị nke whales ma ọ bụ Azụ dolphin ma ọ bụ ọbụna ma. Ị naanị iji kwụọ ụgwọ ọ dịghị ihe ọzọ $35 ịhụ mma.
2. Igwu na-atụrụ ndụ na Playa Los ube
ọnụego – Playa Los ube
A ụbọchị n'oge okpomọkụ na Tarifa, Spain mgbe ọ bụla zuru okè na-enweghị a anwụ na-acha ụbọchị na Playa Los ube. Nke a bụ kasị ama beach na Tarifa bụ mgbe jupụtara ọbịa n'oge okpomọkụ. Ọ & rsquo; s heaven n'ihi sunbathers na-egwu mmiri. Na & rsquo; s ihe na-eme ka a beach ihe ezigbo ntụpọ maka ezinụlọ na-enwe ụbọchị si aga ije, na-egwu mmiri na messing na mmiri. Tinyere osimiri akara nwere ọtụtụ nri ulo iri ere atọ ụtọ local oriri. N'oge oyi, Ụsọ oké osimiri a dịkwa nnọọ ewu ewu maka surfers egbe. Ọ bụrụ na ị & rsquo; re ọchịchọ ịmata-agbalị egbe Farisii ahụ na-, -abịa Tarifa n'oge oyi.
3. -Eje ije gburugburu Baelo Claudia
ọnụego – Baelo Claudia
Dị nnọọ ka ọtụtụ n'obodo ukwu na Spain, Tarifa na-akwado iche iche ochie ụlọ gụnyere Baelo Claudia bụ nke dị 14 km pụọ ná mpụga obodo. Nke a bụ mbibi nke Roman ụlọ. na ebe a, ị pụrụ ịnụ ụtọ dị iche iche na-adọrọ mmasị site ochie ọgbọ egwuregwu na-local tuna nhazi. Na-eme ị maara na ebe di otu a n'ezie ebe ndị Rom mere ka ha mbinye aka tuna ihendori a na-akpọ Garum?
4. Hiking na Natural ogige ntụrụndụ
ọnụego – hiking
Tarifa nwekwara mara mma eke ọnọdụ maka hiking. Dị n'agbata abụọ a ma ama eke ogige ntụrụndụ na Spain, Mmadụ Park nke Strait Natural Park na acorns, Tarifa bụ maa a hikers’ paradise. Na-ewu ewu na-aga na-amalite site Punta Paloma gafee ọgba n'ili na San Bartolome & rsquo; s nkume outcrop. Ebe a, ị nwekwara ike nēri ihe na ndị kasị ama ụlọ oriri na ọṅụṅụ a maara dị El Tesoro.
5. Ịnya anyịnya
Awat Horse na Tarifa
E wezụga na a zuru okè ntụpọ maka hiking, Tarifa bụkwa ezigbo maka ịnyịnya hiking. I nwere ike inwe ahụ iru ala ịnya anyịnya na osimiri akara, ihe a n'ụzọ zuru okè na-anọ ụbọchị, nri?
Inwe ezumike ke Tarifa a ezughị okè na-enweghị partying na Tarifa. Obodo a esetịpụ nnukwu kwa afọ party ememme na September. E kweere a izu ogologo na jupụtara dị iche iche na-adọrọ mmasị. N'oge ememme, n'okporo ámá ndị ahụ jupụtara na ísì, agba na mkpọtụ nke nēsì ísì utọ perfuming. Ọ & rsquo; s emekwa otu ahụmahụ i na-ekwesịghị ileghara.
7. -Eje ije na nnukwu ụlọ mgbidi
ọnụego – Guzman el Bueno Castle
The ikpeazụ kwesịrị-aga-eme ọrụ na Tarifa na-eje ije akpuruakpu mgbidi. mara dị ka Guzman el Bueno, a nnukwu ụlọ a maara na-kasị mma-echebewo Caliphal nnukwu ụlọ. Ọ e wuru na 960 n'oge Muslim ọbubu. A nnukwu ụlọ nwere ogologo akụkọ ihe mere eme na ihe ọ bụla anụ ọhịa nke nnukwu ụlọ na-agwa niile akụkọ. Mgbe na-eje ije a nnukwu ụlọ mgbidi, ị ga-na a ije nke akụkọ ihe mere eme.
Ga gara Places: Portsmouth Historic Dockyard – Museum of Leg... echiche 31
England since long time ago is so famous with it's legendary fleet. Ọfọn, if you want to know more about the history of the British Marine please come...
Venice – Romantic Floating City, Suitable fo... echiche 139
Inwe ezumike na Venice, Italy bụ nnọọ ahụmahụ dị ụtọ. The a mara nnọọ mma, na obodo gbara gburugburu ọtụtụ ọwa mmiri. Down to every ...
Queen Mary n'Ubi - Kasị Maa Mma Rose Ga ... echiche 179
Queen Mary n'Ubi bụ otu n'ime ndị kasị ihunanya ebe ke UK. Ọ na-emi odude ke ebe nke Regent si Park. The ogige aha na-abịa site aha nke King G ...
Portobello Market – Hunting Antiques in Lond... echiche 44
Fans nke antiques ị ga-eleta ebe a, Portobello Market bụ otu n'ime ndị kasị ama na-eleta eleta ụwa.
REGALEIRA – MYSTERIOUS HIDDEN PALACE OF LISB... echiche 152
Extraordinary Journey Nnweta Top nke Canigou elu echiche 3
Spain and France is separated with natural border called Iberian Peninsula. Na mpaghara ebe a, Pyrenees takes place as the top peaks. Several rock mountain...
Arụsị - Ebighị Ebi Ancient Temple nke Rome echiche 262
N'akuku ọrụ dị ka a isi obodo, Rome na-etiti nke Italian njem na-enwe a otutu akpali ebe. Onye nke kasị mma njem ntụpọ nke R ...
ST CHARLES BRIDGE – ROMANTIC PLACE IN PRAGUE echiche 71